Maxkamadda CQS oo looga yeerayo Fahad Yaasiin | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxkamadda CQS oo looga yeerayo Fahad Yaasiin
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Rooble, ayaa u muuqda inuu ka dhabeynayo ballan-qaadkiisii hore ee ahaa in uusan ka hari doonin shaqsiyaadka lagu tuhmayo kiiska Ikraan ee Fahad Yaasiin ugu horreeyo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kadib ga’aankii Maxamadda sare isaga fogeysay ka gar-naqidda dacwadii Fahad Yaasiin ka gudbiyay Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka [FEIT], ayuu soo baxayaa war sheegaya in billowga bisha soo socota ee May, Fahad looga yeeri doono Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen ilo loo qaateen ah, Xeer-ilaalinta Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayaa diyaar u ah, in ay dib u furaan, dacwad hore looga gudbiyay Madaxdii Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka [NISA] oo salka ku heysa kiiska Sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax.
Qofka ugu horreeya ee ku eedeysan kiiska Ikraan ayaa ah, Fahad Yaasiin, halka ay soo racayaan, Yaasiin Faarey, Kulane Jiis iyo Cabdiqani Diirrane (Wadna-qabad) oo dhamaantood ahaa, shaqsiyadkii ugu sharta badnaa hay’adda NISA iyo dalka oo dhan afatii sano ee la soo dhaafay.
“Kadib dhamaadka bisha Ramadaan, Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada ayaa la filayaa inay u yeerto afarta eedeysane, waa macquul in Fahad kaliya loo yeero, maadaama Farey iyo Kullane, heleen xasaanad Xildhibaannimo”, ayuu yiri Sarkaal ka cudur daartay in aan magaciisa baahinno.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, oo dhowr jeer hore u ballan qaaday inuu geed dheer iyo mid gaabanba u kori doono caddaalad u raadinta Ikraan, ayaa gadaal ka riixaya dacwadaan, isagoo garab ka helaya masuuliyiin xilal haya iyo siyaasiyiin mucaarad ah.
Dib u furidda kiiskaan, ayaa ku soo aadi doona, maalmo kadib marka la doorto Guddoonka Golayaasha Baarlamaanka 11-aad ee JFS, waxaana go’aanka Maxakamaddu soo bixi doonaa, ka hor inta aan loo dareerin doorashada xilka ugu sarreeya dalka, taasoo caqabad ku ah kooxda Fahad hor-kacayo.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, General Buule-kamey, oo 21 November 2021, soo bandhigay baaris hordhac ah, oo ku saabsan kiiskan, ayaa sheegay in guddiga barista kiiska Ikraan, aysan u soo bixin wax caddeyn ah oo muujinaya in Ikraan ku maqan tahay gacanta Saraakiisha NISA.
Hayeeshee, go’aankaas ayaa lagu sifeeyay mid siyaasadeed oo cadaaladda ka fog, yeelkeede, xogta soo gaartay KON, ayaa hoosta ka xariiqeysa in Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, ku baraarugsan tahay, in la siibay miciyihii siyaasadeed ee Fahad, isla-markaana aysan jirin awooddiisii hore.
Ra’iisul Wasaare Rooble, wuxuu bishii September ee sanadkii hore Fahad ka raacdeeyay xilkii uu dadka ku dhibi jiray ee agaasimaha NISA, halka uu mar kale, ka hor taagan yahay inuu ka mid noqdo Baarlamaanka 11-aad, taasoo ay sii dheer tahay inuu la daba joogo eedo la xariira kiisas dil ah.